Vaovao - valizy Cryogenic ho an'ny fampiharana LNG
Valves cryogenika ho an'ny fampiharana LNG
1. Misafidiana valva ho an'ny serivisy cryogenika
Ny fisafidianana valizy ho an'ny fampiharana cryogenika dia mety ho sarotra be. Ny mpividy dia tsy maintsy mandinika ny fepetra eny amin'ny sambo sy ny ozinina. Ankoatr'izay, ny toetran'ny tsiranoka cryogenika dia mitaky fampisehoana valizy manokana. Ny fisafidianana araka ny tokony ho izy dia miantoka ny fahatokisana ny zavamaniry, ny fiarovana ny fitaovana ary ny fandidiana azo antoka. Ny tsenan'ny LNG manerantany dia mampiasa endrika valizy roa lehibe.
Ny mpandraharaha dia tsy maintsy mampihena ny habeny hitazonana ny tanky gazy voajanahary araka izay kely indrindra azo atao. Izy ireo dia manao izany amin'ny alàlan'ny LNG (gazy voajanahary liquefied, gazy voajanahary liquefied). Amin'ny alàlan'ny fampangatsiahana ny entona voajanahary dia mety ho lasa rano. -165 ° C. Amin'ity mari-pana ity dia tsy maintsy miasa hatrany ny valizy mitoka-monina
2. Inona no fiantraikany amin'ny famolavolana valizy?
Ny mari-pana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny famolavolana ny valva. Ohatra, ny mpampiasa dia mety mila izany amin'ny tontolo malaza toa ny Moyen Orient. Na, mety mety amin'ny tontolo mangatsiaka toa ny ranomasina polar. Ireo tontolo iainana roa ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fihenjanana sy ny faharetan'ny valizy. Ny singa amin'ireo valves ireo dia misy ny vatan'ny valve, bonnet, stem, tombo-kase, valizy baolina ary seza valizy. Noho ny firafitr'ireo fitaovana samihafa, mivelatra ireo faritra ireo ary mifanakaiky amin'ny maripana samihafa。
Safidy fampiharana Cryogenic
Mampiasa valve ny mpandraharaha amin'ny tontolo mangatsiaka, toy ny rig menaka amin'ny ranomasina polar.
Mampiasa valve ny mpandraharaha hitantanana ny tsiranoka izay ambany be noho ny hatsiaka.
Raha misy etona mora mirehitra, toy ny gazy voajanahary na oksizena, ny valizy dia tsy maintsy miasa tsara koa raha misy afo.
Misy fanamafisana ny tsindry mandritra ny fikirakirana ny vata fampangatsiahana. Izany dia vokatry ny fiakaran'ny hafanan'ny tontolo iainana sy ny fananganana setroka manaraka. Ny fitandremana manokana dia tokony horaisina rehefa mandrafitra ny rafitry ny valizy / fantsona. Io dia mamela ny fanerena hitombo.
Ny fiovan'ny mari-pana haingana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiarovana ny mpiasa sy ny ozinina. Noho ny firafitr'ireo fitaovana samihafa sy ny halavan'ny fotoana iharan'izy ireo ny vata fampangatsiahana, ny singa tsirairay ao amin'ny valizy cryogenika dia manitatra sy mifampiraharaha amin'ny taha hafa.
Olana lehibe iray hafa koa rehefa mikarakara vata fampangatsiahana dia ny fiakaran'ny hafanana avy amin'ny tontolo manodidina. Io fitomboan'ny hafanana io no mahatonga ny mpanamboatra hitokana valves sy fantsona
Ho fanampin'ny maripana avo lenta, ny valizy dia tsy maintsy miatrika fanamby lehibe koa. Ho an'ny helium liquefied, ny maripanan'ny gazy liquefied dia milatsaka hatramin'ny -270 ° C.
Mifanohitra amin'izany, raha milatsaka amin'ny zero tanteraka ny mari-pana, dia lasa tena sarotra ny fiasan'ny valizy. Ny valizy cryogenika dia mampifandray ireo fantsona misy gazy misy rano amin'ny tontolo iainana. Manao izany amin'ny maripana manodidina izy. Ny valiny dia mety ho fahasamihafana eo amin'ny mari-pana hatramin'ny 300 ° C eo anelanelan'ny fantsona sy ny tontolo iainana.
Ny fahasamihafana eo amin'ny maripana dia miteraka fikorianan'ny hafanana avy amin'ny faritra mafana mankany amin'ny faritra mangatsiaka. Hanimba ny fiasan'ny valizy mahazatra izany. Izy io koa dia mampihena ny fahombiazan'ny rafitra amin'ny toe-javatra tafahoatra. Mampanahy manokana izany raha mipoitra eo amin'ny farany mafana ny ranomandry.
Na izany aza, amin'ny fampiharana mari-pana ambany dia niniana natao ihany koa io fizarana fanafanana passif io. Ity dingana ity dia ampiasaina hamehezana ny vatan'ny valizy. Matetika ny tombo-kase valizy dia voaisy tombo-kase amin'ny plastika. Ireo fitaovana ireo dia tsy mahazaka hafanana ambany, fa ny tombo-kase metaly avo lenta amin'ireo faritra roa, izay mihetsika be amin'ny lalana mifanohitra aminy, dia lafo be ary saika tsy azo atao mihitsy.
Misy vahaolana tena tsotra amin'ity olana ity! Mitondra ny plastika ampiasaina hamehezana ny vatan-tsofina ianao amin'ny faritra iray izay somary normal ny mari-pana. Midika izany fa ny tombo-kase amin'ny vatan'ny valizy dia tsy maintsy tazonina lavitra ny tsiranoka.
8: valizy fanokanana tery mihodina telo
Ireo offset ireo dia mamela ny valizy hisokatra sy hanidy. Kely dia kely ny fifandonana sy ny fikorontanana mandritra ny fandidiana. Izy io koa dia mampiasa tora-pasika mba hanamafisana kokoa ny valizy. Ny iray amin'ireo fanambin'ny fitehirizana LNG dia ny lavaka voafandrika. Amin'ireo lava-bato ireo, ny ranoka dia afaka mivonto maherin'ny 600 heny. Ny valizy mitoka-telo mihodina telo dia manala an'io fanamby io.
9. valves maso baffle tokana sy roa baffle
Ireo valves ireo dia singa iray lehibe amin'ny fampitaovana «liquefaction» satria misoroka ny fahasimbana ateraky ny fikorianan'ny fivadika. Ny fitaovana sy ny habe dia zava-dehibe hodinihina satria lafo ny valizy cryogenika. Ny valin'ny valves tsy marina dia mety hanimba.
Ahoana ny fomba hiantohan'ny injeniera ny fihenan'ny valizy cryogenika?
Tena lafo ny fivoahan'ny rano rehefa heverin'ny olona ho vidin'ny vata fampangatsiahana ny lasantsy. Mampidi-doza ihany koa.
Ny olana lehibe amin'ny teknolojia cryogenika dia ny mety hisian'ny fivoahan'ny seza valizy. Matetika ny mpividy dia manamaivana ny fitomboan'ny radial sy ny tsipika mifandraika amin'ny vatana. Raha misafidy ny valizy mety ny mpividy dia afaka misoroka ireo olana etsy ambony izy ireo.
Ny orinasanay dia mamporisika ny fampiasana valves amin'ny mari-pana ambany vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Mandritra ny fiasan'ny lasantsy liquefied dia mamaly tsara ireo gradienan'ny mari-pana ny fitaovana. Ny valizy cryogenic dia tokony hampiasa fitaovana famehezana mety tsara miaraka amin'ny barany hatramin'ny 100 bar. Ankoatr'izay, ny fanitarana ny bonnet dia singa iray tena lehibe satria mamaritra ny fihenan'ny tombo-kase.
Karazana sy fisafidianana valizy pneumatic ac ...
Tongasoa eto amin'ilay tranonkala vaovao an'ny NEWSWAY VALVE
© Copyright - 2010-2022: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra mafana - Sitemap